Eyona Moto iphathekayo iphakamileyo yokuPhakamisa i-DC yoMvelisi kunye neFektri | IsiTonghe
I-LUXMAIN DC uthotho olukhawulezayo lokuphakamisa into encinci, ukukhanya, ukwahlula imoto. Iseti yezixhobo zohlulwe zaziimitha ezimbini zokuphakamisa kunye neyunithi yamandla enye, iyonke zizinto ezintathu, ezinokugcinwa zodwa. Isakhelo esinye sokuphakamisa isakhelo, esinokuqhutywa ngokulula ngumntu omnye. Kuxhotyiswe ngevili lokutsala kunye nevili lendawo yonke, ekulungeleyo ukurhuqa kunye nokulungisa indawo yokuphakamisa.
I-LUXMAIN DC uthotho olukhawulezayo lokuphakamisa into encinci, ukukhanya, ukwahlula imoto. Iseti yezixhobo zohlulwe zaziimitha ezimbini zokuphakamisa kunye neyunithi yamandla enye, iyonke zizinto ezintathu, ezinokugcinwa zodwa. Isakhelo esinye sokuphakamisa isakhelo, esinokuqhutywa ngokulula ngumntu omnye. Kuxhotyiswe ngevili lokutsala kunye nevili lendawo yonke, ekulungeleyo ukurhuqa kunye nokulungisa indawo yokuphakamisa. Iyunithi yamandla e-DC12V idityaniswe kwiinjini yemoto ngocingo lomlilo, olunokuqhuba imoto ukuba isebenze kwaye iqhube isakhelo sokuphakamisa isithuthi ngokulula. Icandelo lamandla likwaxhotyiswe ngesixhobo sokuvumelanisa ngesanti kubunzulu baphantsi, ukuqinisekisa ukuphakanyiswa kokungqinelana kweefreyimu zokuphakamisa kumacala omabini. Zombini iyunithi yamandla kunye nesilinda yeoyile azinamanzi. Logama nje ikumhlaba oqinisiweyo, ungayiphakamisa imoto yakho ukuze igcinwe nanini na kwaye naphi na.
Ngaba usenza ulondolozo lweemoto ngaphandle ngale ndlela? Ngaba usakhathazekile malunga nokuqhekeka kwemoto yakho ngaphandle ulinde ukuhlangulwa kweengcali? Lixesha lokutshintsha isiko!
Ingcamango entsha yolu shishino yenza ukuba kungenzeki.
LUXMAIN Ukunyusa ngokukhawuleza kunokuyenza!
Ukuphakama okuphezulu kwesakhelo sokuphakamisa yi-88mm kuphela, ehlangabezana neemfuno zokuphakama kwesisu sayo yonke imodeli kwintengiso.
Yahlula uyilo lwesakhelo sokuvula esiphakamileyo.
Indawo enkulu yenza ukusebenza ngakumbi!
Inikezela ngoncedo olukhawulezileyo olunamavili kunye nokufikelela okucacileyo kwesithuthi
Ubungakanani bokulayisha okuphezulu ukuya kuthi ga kwi-632mm (ixhotywe nge-heighten adapters).
Indibano ekhawulezayo nelula.
Qhagamshela isakhelo sokunyusa kunye neyunithi yamandla ngeeseti ezimbini zemibhobho yeoyile eza nomatshini kwaye ungayisebenzisa. Lonke uhambo luthatha imizuzu emi-2 kuphela!
Kukulungele ukuhamba, kulula ukuthatha umfana omnye!
Siyile kwakhona ivili lokutsala / ipani, unokutsala, Guqula isakhelo sokunyusa ukulungelelanisa indawo yokuphakamisa.
I-LUXMAIN qucik lift inokugcinwa kwaye ixhonywe eludongeni, ukugcina indawo.
Ubungakanani obukhulu, ndifuna kuphela inqwelo encinci ukuba indigoduse.
LUXMAIN lift ngokukhawuleza uzinzo obalaseleyo. Emva kokuba isithuthi siphakamisiwe, umntu usebenzisa amandla angaphandle kwisithuthi nakweyiphi na indlela, kwaye isithuthi asihambi kwaphela. Ke ngoko, unokusebenza ngokuzithemba.
Xa izixhobo zikwimeko yokuphakamisa isiqingatha, ukuba amandla anqunyulwe ngequbuliso, isakhelo sokuphakamisa sizinzile kakhulu, kwaye siyakuhlala sikwimeko yokuphakanyiswa kwesiqingatha ngaphandle kokuwa.
Izixhobo zixhotyiswe ngesitshixo sokhuseleko ngoomatshini, isakhelo sokuphakamisa senziwe ngentsimbi ekhethekileyo, kwaye ukusebenza ngomatshini kuphezulu. Uvavanyo lomthwalo onzima oluyi-5000kg lwenziwa ngaphandle kwesilinda seoyile, esisazinzileyo kangangoko.
Isilinda yeoyile yenzelwe ukungangeni manzi, ephelisa ingozi efihliweyo yokusilela okubangelwa ngumhlwa wodonga lwangaphakathi lwesilinda seoyile ngenxa yokutshiza amanzi, kwaye yandisa ubomi benkonzo yesilinda seoyile. Ungayiphakamisa ngokukhuselekileyo isithuthi kwaye uyihlambe kakuhle.
Icandelo lamandla lifikelela kwinqanaba lokukhusela i-IP54!
Nceda ukhethe i-46 # anti-wear hydraulic oyile. Kwindawo ebandayo, nceda sebenzisa 32 #.
Umzekelo No L520E L520E-1 L750E L750C-1 L750EL I-L750EL-1
Ukubonelela ngeVoltage AC220V DC12V AC220V DC12V AC220V DC12V
Ubude besakhelo 1746mm 1746mm 1746mm 1746mm 1930mm 1930mm
Ukuphakama kweMini 88mm 88mm 88mm 88mm 88mm 88mm
Ubude besakhelo Ubungakanani: Ubungakanani: Ubungakanani: Ubungakanani: 1653mm 1653mm
Ukuphakama okuphezulu 460mm 460mm 460mm 460mm 460mm 460mm
Ubungakanani bokuPhakamisa 2500kg 2500kg 3500kg 3500kg 3500kg 3500kg
Ububanzi becala elinye lesakhelo sokuphakamisa 215mm 215mm 215mm 215mm 215mm 215mm
Ubunzima besakhelo esinye 39kg 39kg 42kg 42kg 46kg 46kg
Ubunzima beyunithi yamandla 22.6kg 17.6kg 22.6kg 17.6kg 22.6kg Amanqaku 17.6kgg
ixesha lokunyuka / ukuthoba 35 / 52sec 35 / 52sec 40 ~ 55sec 40 ~ 55sec 40 ~ 55sec 40 ~ 55sec
Umthamo wetanki yeoyile 4L 4L 4L 4L 4L 4L
● Ubuninzi bokuphakamisa ubunzima: 2500Kg
● I-Electro-hydraulic drive, exhotyiswe ngombane we-DC12V DC
● Iimodeli ezisebenzayo: 80% yeemoto zodidi A / B
● Indawo esebenzayo: ulondolozo lwangaphandle, ukuhlangula umhlaba, umkhondo weembaleki
● Ubuninzi bokuphakamisa ubunzima: 3500Kg
● Iimodeli ezifanelekileyo: Iipesenti ezingama-80 zeemoto zodidi A / B / C
● Imeko esebenzayo: indawo yokusebenzela kunye negaraji yosapho
● Iimodeli ezisebenzayo: Iipesenti ezingama-80 zeemoto zodidi A / B / C （Ziyakwazi ukuhlangabezana neemfuno zeemodeli zamavili ama-3200mm)
Egqithileyo Iposti ephindwe kabini yokunyusa i-L5800 (A) enomthamo we-5000kg kunye nesithuba esibanzi
Okulandelayo: Ukubonelela nge-OEM kwibhanti yentsimbi yeAluminiyam yeplanga yeAluminiyam
Ukuphakamisa iMoto ngokukhawuleza
Ukuphakanyiswa kweJack Car ngokukhawuleza
Phakamisa ngokukhawuleza ukuPhakamisa imoto
Ukuphakanyiswa kweMoto eKhawulezayo
Isiphatho seHydraulic Scissor seMoto, Ukuphakanyiswa kweMoto eNye ePhathekayo, Iselfowni ePost Post yokuPhakamisa imoto, Isilinda esibambeleyo esinye, Iposi ephindwe kabini yokuPhakamisa phantsi komhlaba, Iposi ephindwe kabini yokuPhakamisa okungaphakathi,